Allgedo.com » Xubno ka tirsan Guddiga Maamul u sameynta Jubbooyinka iyo mas’uuliyiin kale oo maanta ka degay Garbahaarey
Print here| By: allgedo.com: Thursday, February 21, 2013 // 8 Jawaabood
Garbahaarey, Somalia (AOL) – Magaala madaxda gobolka Gedo ee Garbahaarey waxaa maanta ka degay qaar ka mid ah Guddiga maamul u sameynta gobolada Jubbooyinka oo beryahaanba ku sugnaa degmada Doolow oo ay wehliyaan Gudoomiye yaasha degmooyinka Luuq, Doolow iyo Balad-xaawo.
Xubnahaan ayaa markii ay tageen Garbahaarey waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay maamulka gobolka, saraakiil iyo qeybaha kala duwan ee bulshada.
Ujeedada socdaalka wafdigaan ayaa ah sidii ay shir ula qaadan lahaayeen mas’uuliyiinta gobolka oo horay ugu sugnaa Garbahaarey si looga wada hadlo meelna la’isula dhigo hanaanka ugu haboon ee looga qeyb qaadan karo maamul u sameynta gobolada Jubbooyinka.
Wafdiga oo goor galabta ah ka degay garoonka diyaaradaha Garbahaarey ayaa waxaa loo gudbiyay goobtii loogu tala galay in ay degaan, ayada oo maalinta bari ahna ay kulan la qaadan doonaan mas’uuliyiinta gobolka Gedo iyo saraakiisha ciidamada ee horay u joogay magaalada Garbahaarey.
Bulshada ku dhaqan gobolka Gedo, iyo guud ahaan kuwa Jubbooyinka ayaa si weyn isha ugu hayo natiijada kasoo bixi doonta kulamada dhex mari doona mas’uuliyiintan, kuwaasoo si weyn ugu kala aragti duwan dhisidda maamul goboleedka Jubbaland.
Dhanka kale, waxaa rajo aad u weyn laga qabaa in mas’uuliyiinta maanta isugu tagay Garbahaarey ay awood u yeelan doonaan in ay ka gudbaan isfahan waaga dhanka fekerka ah ee u dhaxeeya, isla markaana ay ku heshiin doonaan sidii ay bulshada reer Gedo si wada jir ah uga qeyb qaadan laheyd dhismaha maamul u sameyna Jubooyinka, taasoo haddii ay dhacdo noqon doonta guul weyn oo usoo hotay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolada Jubbooyinka.
Aden A. Colujoog, AOL Editor-In-Chief
8 Jawaabood " Xubno ka tirsan Guddiga Maamul u sameynta Jubbooyinka iyo mas’uuliyiin kale oo maanta ka degay Garbahaarey "
Waa guul suu hooyaate. haanolato Jubaland nabad iyo hurumaar insh allah
Asc waxaan salaamayaa dhamaan umada somaliyeed gar ahaan ree gado aad ayaan u taageeraynaa shirka garbaharey waxaan ku farxsanahay ana jecelnahay mid nimada juba land waxan u rajaynayaa in lagu heshiin doono shirkaas waxaan leehay guuul walaalah juboyinka.
Maxamuud sheesh xasan says:
Walaalow war baankuu hayaa waxaa tiraa , wacdiguu ustaadkeenu Yiri weedh aan rabo weeye” sayid maxamed. Haatan article ka meeshaa ku qoran aad baan jeclahahay.
waan idinsalaamay aqyaarey waxaan u malaynayaa in aaysan waxbo kasoo baxaynin waayoo isku aragti lagama aha mana laga noqondoono raga aaminsan kismaayo booba inta aan la.idinkusogaarin waligood heshiis maqaadanayaan rer gadoodkana illaa dhulka laga xoreeyo war malaha
Maashaa Allah, guul guul
asc dhamaan waan insalaamay s/kadib margaan argo habdhaqanka haweye iyo kanraxanwayn iyo doqonimada daarood waan yaabaa waayo runtii daarood k-wuu hurdaa ee waxaan dhihi lahaa daaroodoow hurtada kagac raxanwayn marwalbo waxay kuhaysaaaaaaa jubaland anaa iskale waxaas waxay kamaqashay runtii waa haweye waxaan kudalinlahaa daaroodoow waad huridaaye hurdada kagac daas waamid midakale dadka jubooyinka dago waxaan kuladalinnaayaa dadna hadulminina lkn haga ogalaaneyna waxa lagawado xamar iyo jabuuti oo ah daarood halalaayo ama halagadhigo kun axmed diiriye iyo xaad maxaa kagalay jubooyinka horta daas hala is waydiiyo arintaaaaaas sidaas iyo nabad gelyo
asc ,, salaan kadib jubbaland reer jubbaland baa leh sxb, nin dool ahna talo ugama banaana kumana uulaha,,ee dadkaan say xaraan u cunayeen hada ay kaga dhegatay waxbaaa la boobayaa, waxaan leeyahay wadanka hadaad tuulono ha ahaatee wax kuleeddin maamul u dhista jubbaland dadkeedii tashade e ninka cadowgooda garabsiinayana il gooniyey kuu fiirinayaan oo ogyiine, waxaan leeyahay
waxaan oran karaa waa guul u soo hoyatay dhamaan shacab weynaha jubooyinka iyo gedo guuul ayaan idiin rajaynayaaaaaa ninkii kanaxayow ciil u dhimo